သက်ဝေ: အဖြေမထွက်သော ပုစ္ဆာ
sin dan lar February 18, 2009 at 1:56 PM
Kay February 18, 2009 at 2:03 PM
အဖြေထွက်သေးဘူးလား--migraine လား။ ခရီးထွက်လိုက်။ ပိုက်ဆံတော့ပျောက်မယ်..း)
strike February 18, 2009 at 4:30 PM
ဖြုတ်လဲလိုက် သက်ဝေ ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့
ခင်မင်းဇော် February 18, 2009 at 6:01 PM
အမ ထင်တာက အာရုံကြော ကြောင့် ဖြစ်မယ် ။ ဆေးခန်းမြန်မြန်ပြစေချင်ပါတယ်။
ဆေးသောက်ရုံနဲ့ ပျောက်နိုင်ပါတယ်။ မပေါ့စေချင်ပါ။
နောက် အတွေ့အကြုံတခုအရ သွေးကိုစစ်ပြီး သွေးထဲက ဓါတ်တချို့ လျော့နည်းရင်လဲ ခေါင်းကိုက်တတ်ကြောင်း သိထားပါတယ်။ ဒီ ၂ မျိုး ထဲက တခုခု ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။
ကျော်ကြီး February 18, 2009 at 8:04 PM
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ မှန်နေပြီထင်တယ်... ဟီးဟီး.. (ဒုတိယံမိ ထပ်စခြင်း) :P
nu-san February 18, 2009 at 9:41 PM
မမသက်ဝေ ခေါင်းကိုက် ဇက်နာက မပျောက်သေးပဲကိုး.. အမ မျက်မှန်တပ်ရလားဟင်.. ကျနော်ဆို မျက်မှန်တပ်တာ ပျင်းပြီး ကွန်ပျူတာ ကြည့်တာ များရင်လည်း ခေါင်းကိုက်တယ်.. ဇက်နာတာတော့ မဟုတ်ဘူး.. ဇက်ကြောတက်တယ်.. ပြီးတော့ မကေ ပြောသလိုလဲ migraine ဖြစ်နိုင်တယ်.. migraine သမားတွေပြောတာ ကျတော့ ခေါင်းတခြမ်းပဲ ကိုက်တာတဲ့... နောက်ဆုံး အကြံပေးရရင်တော့ ဆေးခန်းသာသွားပြလိုက်ပါတော့ အမရယ်... :D
လင်း February 18, 2009 at 9:50 PM
ဆေးများတွေ့ ပြီလားလို့အပြေးလာဖတ်တာ။ လင်းလဲ မထူးမခြားနားပဲ ။ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန် ကွန်ပျူတာကို ပစ်ထားပြီးနေတော့လဲ စာအုပ်ဖတ်ရင်ဖတ် မဖတ်ရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်မို့ သိပ်မထူးပါဘူး။
လူသစ် February 18, 2009 at 9:58 PM
ဦးနှောက်ကင်ဆာ ဖြစ်တာထင်တယ်။ ညဖက်အိပ်ရင် ခေါင်းကို ရင်ဘတ်ပေါ်တင်မအိပ်နဲ့ အသက်နဲ့ နီးတယ် သတိထား :)
strike February 18, 2009 at 10:18 PM
pandora February 18, 2009 at 10:34 PM
khin oo may February 18, 2009 at 10:49 PM
လူပျံတော် ပတ္တာမြားလေး ..ဘယ်လိုသဘောရသလဲ။ ဒါမှ မဟုတ် စုစုအေးအောင် ဆေး.။
အောင်သာငယ် February 18, 2009 at 11:40 PM
ကျုပ်ကျက်လိပါ... မပေနဲ့...း)
မီယာ February 19, 2009 at 4:12 AM
မနော်လို ပင်လယ်လေထွက်ရှုလိုက်ပါလား... အပြောင်းအလဲပေါ့။ ခွင့်မယူနိုင်လည်း ရုံးပိတ်ရက်မှာ သွားလို့ရတာပဲ။ ပို့စ်အသစ်အတွက် ကုန်ကြမ်းတောင် ရဦးမယ်.. :)
Anonymous February 19, 2009 at 6:21 AM
ပုံ့ရိပ် February 19, 2009 at 11:46 AM
အစ်မသက်ဝေကလည်း ပေတာပဲ။ ဆရာဝန် သွားပြလိုက်ပါ။
Welcome February 19, 2009 at 12:58 PM
ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ချာဝန်မဟုတ်လို့ တပ်အပ်သေချာ မပြောနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တွေ့အနေနဲ့ ..
(၂)ကောင်းပြန်တော့လည်း ဘလောဂ့်ထဲ အလည်လွန်မိတဲ့အခါ။
(၃)ဘော်ဒါတွေရဲ့ ပို့စ်တွေကို ကွန်မင့်လှ၂လေး ပေးဖို့ အကြိမ်၂ဖတ်ပြီးစဉ်းစားရတဲ့အခါ။
(၄)ကိုယ့်ဘလောဂ့်မှာ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်တဲ့ အခါ။ အဲဒါတွေလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြေတံပိုရှည်ပြီး ဘာမှ မညီးငြူတတ်တဲ့ မကြီး kom က ပိုသိမယ် ထင်ပါတယ်။
khin oo may February 19, 2009 at 3:48 PM
welcome ပြောခါမှ ကိုက်သွားတယ်။
myo February 19, 2009 at 5:08 PM
"ခေါင်းတွေ အုံခဲကာ တဆစ်ဆစ်ကိုက်လို့နေသည်။ ဇက်ကလဲ တော်တော်နာနေသည်။ ဆေးခန်းသွားဖို့လည်း ဆန္ဒ မရှိပါ" ပေတာခြင်းတူပါသည်
Moe Cho Thinn February 20, 2009 at 2:57 AM
ချိုသင်းလဲ အဲဒီလို ဖြစ်ဖူးတယ်။ အာရုံကြော အားနည်းတာ ထင်တာပဲ။ Vitamin B Complex သောက်တာ သက်သာသွားတယ်။ ဘေးမဖြစ်ဘူး ထင်လို့ စမ်းကြည့်ပါလားဟင်။
ချိုသင်းကတော့ မမနဲ့ ပြောင်းပြန်။ ဆေးဆိုရင် ကောင်းမယ် ထင်လို့ တိုက်တာပဲ ဆိုပြီး အမြဲ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သောက်တယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးရည်က လွဲရင်ပေါ့။ လိမ်မာတယ်ဟေ့ သောက် သောက် လို့ ဆေးသောက်ခါနီးတိုင်း သူက ပြောလို့ သောက်တာပဲ။ တကယ်လိမ်မာတာ။ ဆေးတွေတော့ သောက်ရ၊ ထိုးရတာ များလွန်းလို့ ရိုးတောင် နေပါပြီ။
တန်ခူး February 20, 2009 at 10:40 PM
သက်ဝေရေ… ဒီတပတ်လုံး တို့ လဲ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ်…
တို့ က အစာအိမ်ရှိတော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သိပ်မသောက်ဖြစ်ဘူး…
ခေါင်းလျှော်တာ သိပ်မိုးမချူပ်စေနဲ့ လေ…
တို့ ကတော့ မျက်ကပ်မှန်ကြောင့် ထင်ပြီး အိမ်ကို အသစ်တခုမှာထားတယ်…
အဘထ မြန်မာရှုဆေးလဲကောင်းတယ်… ထုံးနဲ့ လျှက်ဆားနဲ့ရှူလဲ သက်သာတယ်…
ဟီးဟီး… ဆေးမြီးတိုတွေ ပြောနေတာ သက်ဝေကိုကြီးသိမှာ ကြောက်သား….
strike February 21, 2009 at 3:19 PM
khin oo may February 22, 2009 at 8:52 AM
တထုပ်နဲ့ အလုပ်မဖြစ်ရင် နှစ်ထုတ်သောက်ပါ။
Ama, dont go to office more than one week. you will feel better than before. hand over one of ur project (NC) to Manager.
the best sugesstion from One of ur brother
သင်းနွယ်ဇင် February 22, 2009 at 2:40 PM
ကြားဖူးသလောက်တော့ ခေါင်းကိုက်ရောဂါက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တတ်တာပါ။ သာမာန်ဆိုရင်ကတော့
Hmoo February 22, 2009 at 4:23 PM
That's not joke,go N check up...please!
Hmoo February 23, 2009 at 5:01 AM
Give me your address I need to inform police.
strike February 24, 2009 at 1:36 AM
သက်ဝေရေ ပျောက်ပြီလား ဗျို့၊လည်ပင်းအပေါ်ပိုင်းဖြုတ်
Hmoo February 24, 2009 at 11:42 AM
yours address please,I'll inform Internation Red Cross..
သက်ဝေ February 24, 2009 at 1:13 PM
ဆေးခန်းမသွားပဲ ဆက်ပေနေရင် သက်ဆိုင်ရာကို လက်တို့ပြောတော့မယ့်သူတွေ၊ အသက်နဲ့နီးတယ်လို့ အားပေးသွားသူတွေ၊ ခေါင်းကို ဖြုတ်လဲခိုင်းတဲ့သူတွေ အပါအ၀င် ခွင့်ယူပြီး Project တွေကို အထက်လူကြီးဆီ ပြန်လွှဲခိုင်းတဲ့သူ၊ Police ကို အကြောင်းကြားမယ်၊ Red Cross ကိုတိုင်မယ် ဆိုသူတွေကြောင့် မနေ့က ဆေးခန်းသွားလိုက်ပါပြီ... ဆေးသောက်နေပါတယ်...။
မေတ္တာ စေတနာများဖြင့် အကြံပေး မှတ်ချက်ရေးသွားကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူး အများကြီး အများကြီး တင်ပါတယ်...။